6KW FM Starpoint Combiners ရောင်းရန် | FMUSER
2-Way 6kW FM Starpoint Combiner 6000W Star Type Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်
6KW FM Starpoint Combiner ခန့်
အကောင်းဆုံးဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ FM Combiner လား?
FMUSER သည် ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါး ထိပ်တန်း အသံလွှင့်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2008 ခုနှစ်မှစတင်၍ FMUSER သည် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာ developer များနှင့် စေ့စပ်သေချာစွာ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းများအကြား တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုမှတစ်ဆင့် FMUSER သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံး အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ယမန်နေ့က စမ်းသပ်ထားသော အခြေခံမူများကို အသုံးပြုကာ ယနေ့ခေတ်၏အဆင့်မြင့်သိပ္ပံပညာကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်ယူဆုံးသော အောင်မြင်မှုများထဲမှ တစ်ခုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများစွာ၏ ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် FM ပေါင်းစပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
"FMUSER မှ ကောင်းမွန်သောအရာအချို့ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် Transmitter Combiner၊ ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး FM Combiner အတွက် ပါဝါအမျိုးမျိုး၊ 1kw မှ 15kw၊ 40kw မှ 120kw အထိပါဝါများ"
နောက်အပိုင်းကတော့ FM Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် | ကြိုးခုန်
အကောင်းဆုံး FM Combiner ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
FM Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
ဘာကြောင့် FM Combiner လိုအပ်တာလဲ။
FMUSER Multi-channel 6KW FM Branched Combiner သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်-
အပ္ပနာဟိ 6kW မြင့်မားသောပါဝါ 88-108MHz FM အကိုင်းအခက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာ တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အင်တင်နာတာဝါတွင် နေရာလွတ်မရှိခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် FM ဌာနခွဲပေါင်းစည်းခြင်းကို FM Starpoint Combiner (သို့မဟုတ် Star Type Combiner) ဟုလည်း လူသိများသည်။၊ အတူတူပါပဲ။ FM ပေါင်းစပ်စနစ် နည်းပညာသည် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
FM အင်တင်နာသည် FM ပေါင်းစည်းသူ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သော ပါဝါစွမ်းရည်နှင့် ကြိမ်နှုန်းအပြည့်ရှိသော ကျယ်ပြန့်သော အင်တင်နာဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။ မတူညီသောလည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းများအတွက်၊ ရပ်နေသောလှိုင်းအချိုးအစားကို စံနည်းပညာအဆင့်အထိ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော လျော်ကြေးနည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် ဤ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် FM ပေါင်းစပ်မှုစနစ်အဖြစ် အများဆုံးအသုံးချနိုင်စေသည်။
အဆိုပါ FMUSER 6kW transmitter ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။အဆင့်မြင့် RF နည်းပညာနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် CAD နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် စုစုပေါင်း 3/4 ပေါက်များ (ချန်နယ်များ) အဝင်ပေါက်များပါရှိသော၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် FM solid-state FM transmitter စုံတွဲအချို့ထံမှ အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ RF နည်းပညာရှင်များမှ နှစ်များအတွင်း အနှောင့်အယှက်မရှိ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအရာဖြစ်သည်။ ပါဝါမြင့် FM ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် လာပါသည်။
သင်သည် လူသစ် သို့မဟုတ် RF ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။4channels transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တီဗီထုတ်လွှင့်မှုစနစ်တွင် ရှေ့နှင့်အောက်ပါအရာများကြား ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မတူညီသောချန်နယ်များအတွက် transmitter ၏ output များကို ချန်နယ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပြီး အင်တာနာတစ်ခုအား များစွာအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် FM အသံလွှင့်ကိရိယာ။
အင်တင်နာသည် ဈေးကြီးပြီး အင်တင်နာတာဝါတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော အင်တာနာများသာ ရှိနိုင်သောကြောင့် FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် FM/TV ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။
FMUSER သည် မတူညီသော ကာဗာများဖြစ်သည်။ transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများရောင်းရန်ရှိသည်။FM ဟန်ချက်ညီသောပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစပ်ကိရိယာ (အကိုင်းအခက်ပေါင်းစပ်သူ)၊ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် ။ ဤထုတ်ကုန်သည် အံဝင်ခွင်ကျ အငြိမ်းစားယူခြင်းကို ရရှိပြီး မတူညီသော ပါဝါအဆင့်များနှင့် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သီးသန့် ကြိုးမဲ့ ကြိမ်နှုန်း ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက် နှင့် စနစ်ရှိ အလုံးစုံ အပြင်အဆင် သည် စစ်ထုတ်ခြင်းကို ပြန်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ FMUSER မှ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။ စနစ်ဂီယာဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
▲ အကောင်းဆုံး FM Combiner ▲ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
6kW FM Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
ယခင်အပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး FM Combiner ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် FM transmitter ထက် ပါဝါပိုရှိသော passive device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ထပ်မံချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ဟိ4ကလိုင် FM ပေါင်းစပ် အင်တင်နာတစ်ခုတည်းမှ အချက်ပြများစွာကို ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လျော်သောပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အချက်ပြမှုများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ transmitters များတွင် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိပြီး intermodulation ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
6kW FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည့်အခါ သိထားရမည့်အချက်များစွာ
အကယ်၍ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရင်းနှီးနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ rack room မှာ အသံလွှင့်ပေးရတယ်။ FM အသံလွှင့်စက်များ၏ အခြေခံမူများ၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်၊ FM အသံလွှင့်စက်၊ FM အင်တင်နာ ၊ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ စသည်တို့ ၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား မည်သို့မည်ပုံ သို့မဟုတ် ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံး FM နည်းပညာအဖွဲ့ ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များလည်း ရှိပါသည်။ FM အသံလွှင့်စက်များရောင်းရန်ရှိသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည် အကောင်းဆုံး ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ၊ FMUSER ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက်အားလုံးသည် မတူညီသော ရေဒီယိုလိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက်၊ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါစေ၊ FMUSER သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယခင်အပိုင်းကတော့ 6kW FM Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ ဘာကြောင့် FM Combiner လိုအပ်တာလဲ။ | ကြိုးခုန်
ဖောက်သည်တော်တော်များများက ငါတို့ဆီလာပြီး “ဟေ့၊ ဘယ်အမျိုးအစားလဲ။ FM ပေါင်းစပ်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးတွေလား။ FMUSER UHF/VHF ပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။"၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများသည် သင့်အသံလွှင့်ဌာနအတွက် အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်စနစ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ FM ရေဒီယိုလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တီဗီလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရေဒီယိုရဲ့ ရေရှည်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်၊ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်စတဲ့နေ့မှာ အဲဒါကို အလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအများစုတွင် FM အသံလွှင့်စက်များ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ-စတိတ်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုများစွာရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ အဆိုပါ ညံ့ဖျင်းသော ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်သူများသည် ခေတ်မီ လိုင်းပေါင်းစုံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လွှင့်မှု၏ လိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ စက်ကိရိယာတွေ လိုအပ်တယ်။ FMUSER သည် စျေးကွက်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံ ပေါင်းစပ်သူအားလုံးကို အကျုံးဝင်စေပါသည်။ စကားပြောရအောင်၊ အကောင်းဆုံးကို သေချာပေါက် ရှာတွေ့မှာပါ။
တတ်နိုင်သလောက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ပရိသတ်ကို ခံစားခွင့်မပေးပါနဲ့။ သင့်ပရိသတ်များသည် ပြင်းထန်သောဆူညံသံများအပြည့်ဖြင့် ထိုရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို နားထောင်လိုစိတ်ရှိပါသလား။ အဆုံးစွန်သော ရေဒီယိုအစီအစဉ်အရည်အသွေးရှိစေရန် မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာ မြို့ငယ်လေးက အသံလွှင့်ဌာန ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားအသံလွှင့်ဌာနဖြစ်နေပါစေ၊ သင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပရိသတ်ကို မဆုံးရှုံးစေချင်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင်သည် အလွန်နိမ့်သော ပုံပျက်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း ဆုံးရှုံးမှုနှင့် FMUSER မှ VSWR၊ RF ပေါင်းထည့်မှု နည်းပါးသော ဘက်စုံသုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာများကို ရရှိနိုင်သောအခါတွင် သင်သည် သင်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့်ကိရိယာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စတင်နိုင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ မင်းနဲ့မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရလို့ ငါတို့ အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။
ဘယ်လို အသံလွှင့်ကိရိယာမျိုးက အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်စက်လို့ ခေါ်နိုင်မလဲ။ ဒါက စဉ်းစားသင့်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို နမူနာအဖြစ် ယူပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရောင်းချနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၏ ရာနှင့်ချီသော အရောင်းအပြီးတုံ့ပြန်ချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အကြောင်းအရာအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်သောအခါ ပထမအကြိမ်တွင် စျေးနှုန်းနှင့် အသွင်အပြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သာမန်လူများ ဂရုမစိုက်နိုင်သော အချို့သောအသေးစိတ်အချက်များက ၎င်းတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Houston မှ Johnson သည် သူ၏မြူနီစပယ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံလွှင့် turnkey ဖြေရှင်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုကို များစွာစိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြသသောအခါ၊ အပေါက်သုံးခုပါရှိသော 6kw transmitter ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဤမော်ဒယ်၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေသောကြိမ်နှုန်းပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ Johnson ၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသည် ဧရိယာအတွင်း အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပြီး 6kw FM ပေါင်းစပ်သူသည် 2012 ခုနှစ်ကတည်းက Johnson နှင့် ၎င်း၏ပရိသတ်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစည်းသူများ၏ ရောင်းအားပြီးနောက် အကြံပြုချက်ထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အပူချိန်အနည်းငယ်မြင့်တက်ခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မလိုအပ်တော့သော ပါဝါစွမ်းရည်ဒီဇိုင်း၊ ပါဝါပေါင်းစပ်မှုစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံလွှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် စွမ်းရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြောင်း အခြားဖောက်သည်အများအပြားက အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးရှိသည် လိုင်းပေါင်းစုံ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ရောင်းရန်ရှိသည်။FMUSER မှ 4kW မှ 120kW အထိ ပါဝါရှိသော transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။ အတိအကျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည်4kW၊ 15 kW၊ 40 kW၊ 50 kW၊ 70 kW၊ 120 kW FM CIB လိုင်းများ3သို့မဟုတ်4လိုင်း၊ ရရှိနိုင်သော FM CIB ပေါင်းစည်းသူများ၊ FMUSER မှ ချန်နယ်များစွာဖြင့် ကြိမ်နှုန်း 87 -108MHz၊ ကောင်းစွာ၊ FM balanced ပေါင်းစပ်မှုများဟုလည်း လူသိများကြပြီး ၎င်းနှင့် လုံးဝကွဲပြားသည်။ ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစပ်စက်များရောင်းရန်ရှိသည်။; Balanced ပေါင်းစပ်မှုများမှလွဲ၍ Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် 1kW မှ 10kW အထိပါဝါ 1kW မှ 3kW အကြား အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည့် Starpoint ပေါင်းစပ်သူများဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် 6kW၊ 10kW၊ 3kW၊ 4kW FM Starpoint ပေါင်းစည်းသည့် 6၊ 87 သို့မဟုတ် 108 ချန်နယ်များဖြစ်သည်။ , နှင့် XNUMX -XNUMXMHz ရှိသော ကြိမ်နှုန်း၊ ဤပေါင်းစပ်ကိရိယာအမျိုးအစားများကို ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစည်းသူများဟုလည်း ခေါ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံး ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံလည်း ရှိသည်။ UHF/VHF TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ရောင်းရန်ရှိသည်။FMUSER မှ 3kW မှ 40kW အထိ ပါဝါရှိသော TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။
ဤပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် 1 kW၊3kW၊4kW၊6kW၊ 8 kW၊ 8/20 kW၊ 10 kW၊ 15 kW၊ 20kW၊ 15/20 kW၊ 24 kW၊ 25kW၊ 40 kW VHF/H နှင့် TV ပေါင်းစပ်မှုများ ချန်နယ် 3၊4သို့မဟုတ် dual-mode waveguide filters များ ၊ ၎င်းတို့ကို FM branched ပေါင်းစပ်မှုများဟုလည်းလူသိများကြပြီး အချို့မှာ solid-state အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ကက်ဘိနက်အမျိုးအစား ပေါင်းစပ်သူဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှာ L-band ဒစ်ဂျစ်တယ်အမျိုးအစားပေါင်းစည်းသူများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် ကြိမ်နှုန်း6- 167 MHz, 223 - 470 MHz, 862 - 1452 MHz မှ ကြယ်အမျိုးအစား (သို့မဟုတ် ကြယ်ပွိုင့်) ပေါင်းစပ်ထားသော CIB ပေါင်းစပ်သူများ သို့မဟုတ် ကြယ်အမျိုးအစား (သို့မဟုတ် ကြယ်ပွိုင့်) ပေါင်းစပ်သူများဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးမြင့် FM အသံလွှင့်ကိရိယာအချို့အတွက် သင်တာဝန်ယူသည့်အခါ၊ ဥပမာ၊ ပါဝါမြင့်မားသော FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ လိုအပ်သည်-
▲ FM Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် ▲
သင်သည် ယခင်ကထက် 6kW FM Starpoint Combiner လိုအပ်ပါသည်။
RF Combiner သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
FMUSER သည် ကျယ်ပြန့်သော ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ duplexers နှင့် triplexers ရောင်းရန်ရှိသည်။ analog နှင့် HD ရေဒီယို ဒစ်ဂျစ်တယ် FM အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ရန်။ ဤထုတ်ကုန်များတွင် 10 dB Hybrid Injectors၊ Reverse Fed Constant Impedance ပါဝင်သည်။ FM ချန်နယ်ပေါင်းစည်းသူများ နှင့် High-Efficiency Diplexer ။
သင့်ရေဒီယိုစခန်းအတွက် စွမ်းအားမြင့် FM Starpoint Combiner ကို ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
ယူခြင်း4လိုင်းများ transmitter ကို ပေါင်းစပ်ကိရိယာ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ရောနှောထားသော RF ကိရိယာသည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများကို ထုတ်လွှတ်သည့် အချက်ပြလှိုင်းများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ FM transmitter အင်တင်နာဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ အသံလွှင့်ကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆိုပါ အသံလွှင့်ဌာနများသည် FM ထုတ်လွှင့်မှု အင်တင်နာ TENS အစုံအလင်ကို အသုံးပြုမည့်အစား တစ်ခုတည်းသော ထုတ်လွှင့်မှုပေါင်းစပ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် အချက်ပြအများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
မျှဝေမျှော်စင်နည်းပညာ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံပေါင်းစပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော FM/UF/VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကောင်းမွန်သော FM/UF/VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် များစွာသော အင်တာနာများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အချို့မြို့ပြထုတ်လွှင့်ရေးဌာနများတွင် RF အသံလွှင့်စက်များ၏ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်းသည် FM/TV station ၏လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ .
fmradiobroadcast.com တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှန်ကန်သော RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင်ရှိနိုင်သည့်မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန် အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများရှိပါသည်။ fmradiobroadcast.com သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် +86 - 139 - 22702227 သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်းအလိုလားဆုံး FM ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Radio Station အတွက်4Cavity Transmitter Combiner ကို ဝယ်မလား။ ဤနေရာသည် မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။
FMUSER သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း 4+ အနီးတွင် ရောင်းချရန်အတွက် 200 channel transmitter ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည့် အကောင်းဆုံး transmitter ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်မှာ သင် transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူနိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်-
4 Chan 1kW FM Combiner ၏ အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း
A လိုင်း 1 လိုင်းပါရှိသော 4kW transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ FMUSER မှ RF ကို မတူညီသော အရင်းအမြစ်များစွာမှ ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ရလဒ်အမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် FM ပေါင်းစပ်မှုများကို မတူညီသော application အများအပြားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော အသုံးဝင်မှုနှင့်အတူ၊ သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် မှန်ကန်သော FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်းသည် တုန်လှုပ်ဖွယ်အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် တစ်ခုရွေးတဲ့အခါ multi-channel transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာသော့စွမ်းဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ ဆိပ်ကမ်းများအကြား အထီးကျန်မှု၊ ခွဲခြမ်းအချက်ပြမှုများ၏ အနီးနား၊ ခွဲခြမ်းအချက်ပြမှုများအတွက် အချက်ပြအဆင့်၏ နီးကပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
frequency Range: 87 - 108mhz (လှိုင်းနှုန်းတစ်ခုလုံး မော်ဂျူထုတ်လွှင့်မှု တီးဝိုင်း)
ပါဝါစွမ်းရည်- Multi-channel ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ ပါဝါစွမ်းရည်ကို FM ထုတ်လွှင့်သူ၏ ပါဝါအရ သတ်မှတ်ရမည်။
▲ ဘာကြောင့် FM Combiner လိုအပ်သလဲ ▲ သို့ ပြန်သွားရန်
ယခင်အပိုင်းကတော့ ဘာကြောင့် FM Combiner လိုအပ်တာလဲ။ | ကြိုးခုန်
သို့ ပြန်သွားရန် အကောင်းဆုံး FM Combiner ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
6kW FM Combiner အကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
FMUSER 6kW FM Starpoint Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
FMUSER 6kW Star Type Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
3- cavity သို့မဟုတ် 4-cavity filters များ
အံဝင်ခွင်ကျနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အစုံပါပဲ။ အသံလွှင့်ဌာနအတွက်ဒီဇိုင်း
သတိပြုရန်: * L နှင့် H သည် ကြိမ်နှုန်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
~ 107 ကီလိုဂရမ်
~ 140 ကီလိုဂရမ်